Author: Naing Naing
BTS အဖွဲ့ရဲ့ Comeback Album လေးဖြစ်တဲ့ ‘Love Yourself: Tear’ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပြီ
On May 30, 2018 June 4, 2018 By Naing Naing
မကြာသေးခင် အတောအတွင်းကမှ BBMAs ကနေပြီး ‘Top Artist Award’ ကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ Kpop Idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကတော့ ဆက်တိုက်ကို ဖြစ်ပေါ်လို့နေပါတော့တယ်။ ယခုဆိုရင် သူတို့လေးတွေရဲ့ Comeback Album ဖြစ်တဲ့ ‘Love Yourself: Tear‘ ဟာဆိုရင် Billboard 200 Chart မှာ နံပတ်တစ်နေရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကဲ.. ကိုယ်ပြောတဲ့ BTS ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပြီ ဆိုတာကို […]
SHINee အဖွဲ့ရဲ့ ၁၀နှစ်ပြည့် Comeback Album လေးက ထွက်ရှိပြီး ၂၄နာရီမပြည့်ခင်မှာပဲ iTunes Chart မှာ Top ဖြစ်လို့နေပြီတဲ့နော်
On May 29, 2018 June 4, 2018 By Naing Naing
90s Born တွေရဲ့ငယ်ချစ်ဦးလို့ ပြောလို့ရတဲ့ Kpop Boy Group လေးဖြစ်တဲ့ SHINee အဖွဲ့လေးကတော့ ခုဆိုရင် သူတို့ရဲ့ 10th Anniversary အထိမ်းအမှတ် Album လေးတစ်ခု ထွက်ရှိထားပါတယ်။ SHINee ရဲ့ Comeback Album လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ ‘Story of Light‘ Album လေးကိုတော့ မေလ ၂၈ရက်နေ့ ကိုရီးယားစံတော်ချိန်ညနေ ၆နာရီမှာ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ယခု ထွက်ရှိထားတဲ့ […]
တစ်နေ့တစ်ခြား အောင်မြင်ကျော်ကြားလာတဲ့ Kpop Idol အဖွဲ့များအကြောင်းတစေ့တစောင်း
On May 25, 2018 May 28, 2018 By Naing Naing
ပရိတ်သတ်ကြီးကိုဒီတစ်ခါဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ တရှိန်ထိုးအောင်မြင်ကျော်ကြားလာတဲ့ Kpop Idol Group လေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ။ သူတို့အောင်မြင်မှုတွေ Popular ဖြစ်တာတွေကို ဆန်းစစ်ပြီး Rank လေးစီထားတယ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ ကိုယ့် Idol လေးတွေက Rank ဘယ်လောက်နဲ့ အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာလေး ကြည့်ပေးကြဦးနော် ပရိတ်သတ်ကြီး… 20. Oh My Girl ဒီ အဖွဲ့လေးကတော့ WM Entertainment မှနေပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ Debut လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Girl Group […]
မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုမိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ BTS ရဲ့ Comeback Album….
On May 22, 2018 May 31, 2018 By Naing Naing
မေလ ၁၈ရက်နေ့မှာ Comeback Album အသစ်လေးကိုထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့ဟာ အခုဆိုရင် မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကိုအောင်မြင်ကျော်ကြားနေပါတယ်။ BTS ရဲ့ Comeback Album လေးဖြစ်တဲ့ `Love Yourself: Tear´ ဟာဆိုရင် မေလ၁၈ရက်နေ့ ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ညနေ ၆နာရီမှာစတင်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ည၁၀နာရီ ဝန်းကျင်မှာ ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၁၀မီလီယံအထိကိုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မေလ၁၉ရက်နေ့ မနက်၂နာရီအချိန်မှာတော့ ကြည့်ရှုသူ သန်းပေါင်း၂၀အထိကို များပြားခဲ့ပါတယ်။ Youtube မှာ နာရီပိုင်းအတွင်း Viewer […]
မေလအတွက် Brand Reputation Ranking လေးထွက်ရှိလာပါပြီ Kpoper တို့ရေ…
လစဉ်လတိုင်း Kpop Idol တွေရဲ့ `Brand Reputatuion Ranking´ တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Research အမြဲလုပ်နေတဲ့ “The Korean Business Research Institute´´ ကနေပြီး ယခုမေလအတွက် List လေးကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီ Institute ကနေပြီး ကိုရီးယားအဆိုတော်တွေရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုနဲ့အတူ ပရိတ်သတ်အားပေးမှုတွေကို Research လုပ်ပြီး လစဉ်လတိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက Kpoper တွေအတွက်ရည်စူးပြီး Ranking List ကိုအသိပေးကြေညာပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ယခု […]
Hollywood ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ CL
On May 17, 2018 June 4, 2018 By Naing Naing
2NE1 အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်စတိုင်နဲ့ ပရိသတ်ကြီးနှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ CL လေးကိုတော့ အခုဆို Hollywood ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ခုမှာ သူမကို သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ မြင်တွေ့ခွင့်ရတော့မှာပါ။ CL ဟာ ယခင် 2NE1 အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ထဲက သူမရဲ့သီချင်းအတော်များများဟာ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာပါ ကျော်ကြားနေခဲ့ပါတယ်။ ယခု ‘Mile 22’ ဆိုတဲ့ Hollywood ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ သူမရဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ Role နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ခုလိုအသိပေးမှုမပြုခင်က CL ဟာသူမရဲ့ […]
မေလ ၁၃ ရက်နေ့က BTS အဖွဲ့သားတွေဟာ Los Angeles သို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Incheon လေဆိပ်မှနေပြီး ထွက်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီမတိုင်ခင်က BTS အဖွဲ့သားတွေက သူတို့တတွေ မေလ၂၀ ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ကျင်းပမယ့် ဆုပေးပွဲတစ်ခုမှာဖျော်ဖြေတင်ဆက်ဖို့ရှိတယ်လို့ အသိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ BTS ဟာ ၂၀၁၇ တုန်းကလည်း ‘Top Social Artist’ အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ အခုသူတို့တွေမေလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ တက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ ပွဲလေးကတော့ Billboard Music […]
HNB ဆိုတဲ့ Kpop Idol Group လေးကတော့ Happy Face Entertainment (HF Music Company) ကနေပြီး Debut လုပ်မယ့် Boy Group လေးတစ်ခုပါ။ HNB ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ‘HappyFace Next Boys’ လို့သိရပါတယ်။ ဒီ HNB အဖွဲ့မှာတော့ YG Entertainment ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ MIXNINE ပြိုင်ပွဲမှာ နံပတ်တစ်နေရာရရှိခဲ့သော ပြိုင်ပွဲဝင် […]
မကြာခင် Debut လုပ်မယ့် Rose Quartz ဆိုတဲ့ Kpop Girl Group မှာ မြန်မာလူမျိုး မိန်းမငယ်လေးနှစ်ဦး ပါဝင်မယ်တဲ့ဗျို့
On April 30, 2018 June 4, 2018 By Naing Naing
Rose Quartz ဆိုတဲ့ Girl Group ကတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့မစိမ်းတဲ့ အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ပါ။ ဒီအဖွဲ့လေးကို စတင်ဖွဲ့စည်းလာခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်ကာလထဲကပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rose Quartz ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှာ Sung Shin, Earn, Eing နဲ့ Demi ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမတို့လေးဦးကတော့ နာမည်ကြီး Kpop သီချင်းတွေ၊ Billboard သီချင်းတွေကို Cover ပြန်ဆိုရင်း ၂ နှစ်တာအချိန်ကာအတွင်းမှာ […]
Exo အဖွဲ့ရဲ့ Sehun တစ်ယောက် Bigbang အဖွဲ့ဝင် Seungri ဆီကနေပြီး Food Truck လက်ဆောင်ရရှိခဲ့
On April 27, 2018 June 4, 2018 By Naing Naing
Exo အဖွဲ့ဝင် Chanyeol က များမကြာခင်ကာလလောက်က Sehun ဆီကို Coffee Truck လေးပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ Sehun ရဲ့ Movie အသစ်လေးကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ ပို့ခဲ့တာပါ။ ယနေ့ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာတော့ Sehun က Food Truck တစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာ ရပ်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကို သူ့ရဲ့ Instagram မှာ တင်ထားတာတွေ့ရမှာပါ။ ဒီ Food Truck လေးကိုတော့ Bigbang […]